``Forum des métiers`` Nahazo vahana ireo mpitady asa
Fihenan’ny vola ifanakalozana Misy akony ratsy amin’ny toekarena
Tsikaritra fa tsy ampy mihitsy ny vola ifanakalozana eto Madagasikara ary hita taratra io eny amin’ireo banky maro samihafa, indrindra rehefa fotoanan’ny fandraisan-karama.
Orinasa afaka haba Tokony hanatsara ny fari-piainan’ny mpiasa
Mety amin’ny Malagasy ny fisian’ny orinasa afaka haba eto noho izy mifanaraka amin’ny fari-pahaizan’ny maro.
Tsena afrikanina Tombony ho an’i Madagasikara raha …
Mpikambana feno ao amin’ireo tsena afrikanina lehibe tahaka an’ny Comesa sy Sadc i Madagasikara.
Mpandraharaha misehatra amin’ny fambolena sy fiompiana Hampirisihina hitondra tolotra vaovao
Omaly zoma 14 septambra ny fisokafan’ny fisoratana anarana amin’ny fifaninanana ho fampivoaran’ny mpandraharaha misehatra amin’ny famokarana izay karakarain’ny filankevitry ny fampandrosoana ara-toekarena (EDBM) sy ny groupe Axian.
Zaza « autiste » Mitombo isa-taona ny isany
Miisa 5 ireo zaza òtista (autitste) avy eto Antananarivo no misitraka fitsaboana nify maimaimpoana amin'izao fotoana. Ahitana fahasarotana anefa ny mitaiza azy ireny, indrindra eo amin`ny fitsaboana ny nifiny.
Ho fampiroboroboana sy ho fanamorana ny fidiran’ny tanora eo amin’ny sehatry ny asa dia misy hetsika tanterahina isan-taona izay nomena anarana hoe « Forum des metiers des entreprises ».
Tetsy amin’ny Campus Sesame Ambatoroka no izany hetsika izany ny fikambanana PROMES no nitantsoroka ny fanatanterahina azy. Notontosaina ny sabotsy 14 aprily lasa teo izany hetsika izany. Maro ireo tolotr’asa natolotra ho an’ireo rehetra manana ny fahaizamanao mifanaraka amin’izany raha ny nambaran’Atoa Raveloson Romuald, izay mpikarakara ny hetsika. Ny asa mahakasika ny « informatique » no tena maro amin’ny tolotr’asa tamin’ity andiany ity, ka nitombo tsy araka ny niheritreretana azy ihany koa anefa ny taham-pandraisana anjara satria misy ireo karazana asa rehetra hita ato, ka afaka mamaly ny tolotra avokoa ny olona rehetra liana amin’ilay asa. Maro amin’ireo tanora vao misondrotra no mbola tsy mahalala tsara akory ny tena asa ho ataony na dia efa manana ny maripahaizana ahafahana miditra eo amin’ny sehatry ny asa aza. Hetsika miendrika asa soa eo amin’ny fiarahamonina izy ity, ny tanjona voalohany dia ny mba hampihenana ny tahan’ny tsy fananan’asa ary ampiakarana ny harin-karena Malagasy raha ny voalaza ihany. Tafiditra amin`ny tetik`asa PIPOM iarahan`ny AUF, fikambanan`ny DRH ary ny Campus France ny hetsika torolalana sy famolavolana ho an`ny asa araky ny fanazavana.